Tag: kenshoo | Martech Zone
Tsvaga Yekushambadzira Shandisai Q3 2015 Inoratidza Zvinoshamisa Shanduko
NeChishanu, Gumiguru 16, 2015 NeChishanu, Gumiguru 16, 2015 Douglas Karr
Vatengi veKenshoo vanoita macampaign ekushambadzira edhijitari anomhanya mune dzinopfuura nyika dze190 uye anosanganisira dzinoda kusvika hafu yeFortune 50 pamatanhatu gumi epamusoro epasirose agency agency. Iyo yakawanda data - uye nekutenda Kenshoo iri kugovera iyo data nesu pagore roga roga kuti tione maitiro ari kuchinja. Vatengi vanovimba nemafoni nhare kupfuura nakare kose, uye vashambadzi vepamberi vari kutevedzera nemushandirapamwe unowedzera wakagadziriswa wakaunza mhedzisiro mune zvese zviri zviviri.
China, Gumiguru 31, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nyaya mbiri idzo dzevashambadziri vekutengesa dzinogara dzichirwira pamhepo kugona kudzikisa yavo saiti nguva yekutakura UYE kugona kukurumidza kuendesa mamwe ekumaka sarudzo pane avo ewebhu zvivakwa. Iyo yakajairika bhizinesi mubatanidzwa inogona kunge iine deployment purogiramu iyo inotora mavhiki kana kunyange mwedzi kuti uwane shanduko kune saiti. Mumwe wevatengi vebhizinesi redu akabatanidza manejimendi emakambani eBrightTag pane yavo saiti ine mhedzisiro inoshamisa. Saiti yavo yaive ichimhanya akawanda analytics